Mpiasam-panjakana miisa 591 ho tapaka karama - ewa.mg
Mpiasam-panjakana miisa 591 ho tapaka karama
News - Mpiasam-panjakana miisa 591 ho tapaka karama
591ny mpiasam-panjakana tsy handray
intsony karama amin’ity volana oktobra ity ary hiakatra
filankevi-pifehezana, araka ny tatitra nivoaka tao amin’ny
filankevitry ny minisitra farany teo teny Iavoloha. Rehefa
nampiasana ny « logiciel Augure” hanisana ireo
mpiasam-panjakana manerana ny Nosy isaky ny minisitera, nivoaka
ireo olona ireo izay mandray karama isam-bolana nefa tsy miasa na
koa tsy voaisa ho ao anatin’ny mpiasam-panjakana ara-dalàna.
Mahatratra 7 007 ny olona hafa ankoatra ireo mbola eo
am-panamarinana ny momba azy eny anivon’ny fitantanambola.
Politikan’ny fanjakana ny hanadio ny lisitry ny mpiasam-panjakana
tena izy sy ireo mpisandoka nefa mandray vola tsy tapaka.
Nikarakara antontan-taratasy avokoa
ny mpiasam-panjakana isaky ny minisitera hanamarinana fa miasa ao
amin’io minisitera io ary manana laharana maha mpiasam-panjakana
azy. Efa an-taony maro ny nanomboka ny fanadiovana niarahana
amin’ny minisiteran’ny Asa sy ny asam-panjakana.
L’article Mpiasam-panjakana miisa 591 ho tapaka karama a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 23/10/2020
MSANP Live: Fanolorana ofisialy ireo fitaovana sy kojakoja entina miady amin’ny covid-19 / CHUJRA – 13.11.2020
Hialana tsiny indrindra ny fisian'ny teny frantsay rano iray ato amin'ity lahatsoratra : « MSANP Live: Fanolorana ofisialy ireo fitaovana sy kojakoja entina miady amin’ny covid-19 / CHUJRA – 13.11.2020 » ity fa nisafidy izahay ato amin'ny ewa.mg ny hampiseho azy satria saropady ny aretina Coronavirus ka tokony ho fantatry ny mpiray firenena izay mombamomba azy. Fiaraha-miasa eo amin’ny Ministeran’ny fahasalamam-bahoaka, ny Governemanta Japoney ary ny UNFPA. Sombiny amin’ny kabarin-dRamatoa Miranda TABIFOR, Solotena lefitry ny UNFPA eto Madagasikara sy ny Kabarin’ny SEM HIGUSHI Yoshi, Ambasadora Japoney miasa eto amintsika. CHUJRA – 13.11.2020 Niandraikitra ny fampitàna mivantana: DirCom/SCM-MSANP https://www.facebook.com/minsanp/videos/1040279993062002 L’article MSANP Live: Fanolorana ofisialy ireo fitaovana sy kojakoja entina miady amin’ny covid-19 / CHUJRA – 13.11.2020 a été récupéré chez Ministère de la Santé Publique.
Rugby – «Top 20 Analamanga»: tsy tonga ny UASC sy ny SOE
Nitohy ny asabotsy lasa teo, teny amin’ny kianja Alarobia ny fifanintsanana hiadian-toerana amin’ny “Top 20”, hiatrehana ny fifaninanana eto amin’ny ligin’Analamanga. Fihaonana, nokarakarain’ny Malagasy Rugby, noho ny tsy fahazoan’ny mpitantana ny ligy, manatanteraka izany.Lalao dimy no voalahatra, saingy ny telo ihany no tontosa, tamin’izany. Tsy tonga niatrika ny fihaonana, ny UASC Cheminots (Besetroka) sy ny Stade Olympique de l’Emyrne (SOE).Raha tsiahivina, tokony hifanehatra tamin’ny Uscar, ny Besetroka ary ny 3FAI Ambalavao Isotry kosa tokony hikatroka tamin’ny Stade. Araka izany, samy “forfait”, avokoa izy roa tonta ireo. Tsy fantatra aloha, ny antony tsy nanatrehan’ireo fileovana roa tonta ireo, izany lalao izany.Toy izao kosa ireo vokatra hafa, resin’ny Savony, tamin’ny isa 39 no ho 23 ny UIRC. Tsy mbola afa-bela tamin-dry zareo STM indray izany teto ny fivondronana Kely. Lavon’ny US Ikopa, tamin’ny isa, 28 no ho 24 kosa ny Mangart ary nomontsanin’ny XV Avenir, tamin’ny isa mavesatra, 14 no ho 0 ny AFA Ankazomanga. TompondakaL’article Rugby – «Top 20 Analamanga»: tsy tonga ny UASC sy ny SOE a été récupéré chez Newsmada.
Fanofanana momba ny asa
Amin’ny fiandohan’ny volana septambra 2019 ho avy izao no hanatanteraka fampiofanana an’ireo solombavambahoaka eny amin’ny Antenimierampirenena ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Sampandraharaha iraisam-pirenena misahana ny asa (Oit). Tanjona ny mba hahafahan’ireo depiote manolotra tolo-dalàna ho fanatsarana ny tontolon’ny asa eto amintsika. L’article Fanofanana momba ny asa est apparu en premier sur AoRaha.
Nanafika tany Maevatanana: voasambotra tetsy Tsimbazaza ilay nandroba mpandraharaha
Voasambotry ny polisy teny Tsimbazaza, ny 12 jolay 2019 lasa teo, ny jiolahy raindahiny tompon’antoka tamin’ny fanafihana mpitam-piadiana tany Maevatanàna ny volana oktobra 2018 lasa teo…Mpivady mpandraharaha ireto nisy nandroba tao an-tranony any Maevatanàna ireto izay nahaverezana vola 30 tapitrisa Ar, araka ny fanazavan’ny polisy. Tsy niandry ela ny polisy any an-toerana fa nanao ny fikarohana avy hatrany ka tratra ny maraina tamin’io fotoana io ihany ny iray amin’ireo jiolahy nanafika azy mivady ireto. Nitohy ny fanadihadiana ka andro vitsivitsy taorian’izay, tratra ihany koa ny efatra amin’ireo jiolahy, nahatrarana basy miisa efatra. Tsy nijanona hatreto anefa ny fanenjehana ireo jiolahy fa nitohy ny famotorana ary fantatra fa mbola misy jiolahy iray atidoha nikotrika ity fanafihana ity tafatsoaka niakatra aty an-dRenivohitra. Nokarohin’ny polisy ity jiolahy ity ka tratra teny Tsimbazaza tamin’ny zoma lasa teo. Tsy nanampo na inona na inona ity jiolahy ity satria efa voahodidin’ny polisy nanao fanamiana sivily ny trano nisamborana azy. Noraisim-potsiny tao an-tranony izy. Nilaza izy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy fa ankoatra ny fanafihana mitam-piadiana, isan’ireo jiolahy mpanakan-dalana eny amin’ny RN 4 ary voarohirohy amina raharaha fakana an-keriny niseho tany Maevatanàna ihany koa izy. Niaiky ny heloka vitany izy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy.Jean ClaudeL’article Nanafika tany Maevatanana: voasambotra tetsy Tsimbazaza ilay nandroba mpandraharaha a été récupéré chez Newsmada.
Anor tany Diana sy tany Sava: fampanarahan-dalàna ny fitrandrahana volamena
Ny volana jolay teo, nijery manodidina ny fitrandrahana volamena any amin’ny faritra Diana sy ny faritra Sava ny Anor (Agence nationale de l’or). Tanjona ny fampanarahan-dalàna ireo mpitrandraka sy torolalana samihafa ho azy ireo. Na misy masoivohon’ny Anor aza ao Ambilobe, zava-dehibe ny fidinan’ny foibe tany an-toerana nahitana ireo zava-misy maro ka nitondrana fanazavana ireo mpitrandraka volamena ny fampanarahan-dalàna. Nofantarina tamin’izany ny isan’izy ireo, ny teknika fampiasa sy ny lafiny sosialy mifandraika amin’izany asa izany. Nangonin’ny Anor ireo olana any an-toerana, ho fototra hiaingana amin’izay torolalana.Amin’ny ankapobeny, vita ny iraka tamin’ny naharaisana fanirian’ny maro, mampahavitrika azy ireo manohy ny asany. Resy lahatra ireo mpitrandraka sy mpandraharaha ny amin’ny fandrindrana io lalam-pihariana io any amin’ny faritra misy azy ireo. Tonga izy ireo niara-nivory tamin’ny Anor sy ny tompon’andraikitra any an-toerana. Nampitaina ny lalàna amin’ny fitrandrahana volamena, ny andraikitra mifanandrify amin’izany, ary ny tombontsoa azo amin’ny fanarahana izany.Karatra sy fandoavan-ketraOmena karatra ny mpitrandraka manara-dalàna any amin’ny kaominina Ambatoben’Anjavy, distrikan’Ambilobe izay matetika voaresaka; manaraka izany, omena ny ben’ny Tanàna ny momba azy ireo. Ny any amin’ny kaominina Betsiaka indray, nifanojo tamin’ny fandalovan’ny Anor ny fametrahana ny “Birao mpanatanteraka Dina Betsiaka”. Nosoniavin’izay mpikambana vaovao ny « kahiem-patana », fankatoavana ny asa ataon’izy ireo, vahaolana iray amin’ny fampidirana ao anatin’ny ara-dalàna ireo lavaka efa voatrandraka teo aloha.Nohazavaina amin’ireo mpitrandraka koa ny fomba fandoavan-ketra amin’izay fitrandrahana volamena izay. Nofaritan’ny Anor ny fanarahana izany, ny mifanohitra amin’izany kosa, lasa sakana tsy ahafantarana ny fiavian’ny volamena sy ny lalam-barotra.Anor tany AntsirananaNiara-nidinika amin’ireo mpivarotra volamena ny fandalovan’ny Anor tany Antsiranana, nanentanana azy ireo ao anatin’ny ara-dalàna ihany momba izay fanangonana volamena izay. Resy lahatra ireo nantsoina nivory, niombon-kevitra amin’izany miaraka amin’ny tompon’andraikitra any an-toerana. Any Antsiranana ihany, nantsoina ireo mpianatra amin’ny oniversite ho fanitaran’ny Anor ny fifandraisana, ahafantaran’izy ireo bebe kokoa ny lalam-pihariana volamena sy izay mahakasika izany.Naneho ny fahavononany fiaraha-miasa amin’ny Anor, ny BCMM (Bureau du cadastre minier de Madagascar), ny Police des Mines ireo tompon’andraikitra any amin’ny faritra. Fehiny: ho lalam-pihariana manara-dalàna ny fitrandrahana sy ny varotra volamena. R.MathieuL’article Anor tany Diana sy tany Sava: fampanarahan-dalàna ny fitrandrahana volamena a été récupéré chez Newsmada.
PM Christian Ntsay : Pour le respect de la discipline
La journée des sous-officiers célébrée également à la Primature. Lors de la célébration de la journée des sous-officiers, le 1er février dernier, le Premier ministre Christian Ntsay a mis en exergue l’importance de la discipline. C’était lors de la cérémonie qui s’est déroulée, avant-hier, à Mahazoarivo. Le Premier ministre de souligner également que « rien ne va tant qu’il n’y a pas d’apaisement, notamment le respect de la discipline». Et d’enchaîner que « vous êtes parmi les piliers de l’expédition des affaires courantes en faveur de la nation. Et c’est tout à fait normal que l’on célèbre officiellement cette journée qui vous est dédiée ». Il a aussi fait savoir à tout un chacun que le rôle du Bataillon de Sécurité de la Primature (BSP) est la protection des Institutions. Recueillis par Dominique R. L’article PM Christian Ntsay : Pour le respect de la discipline est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article PM Christian Ntsay : Pour le respect de la discipline a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Emploi et services Recrutement Rédacteurs (trices) locaux
Nasnie est une société de rédaction web à taille humaine. Dans le cadre de notre évolution, nous recherchons activement des nouveaux talents pour rejoindre notre équipe de rédacteurs.Vous êtes la personne qu’il nous faut si :- Vous aimez rédiger en français.- Vous êtes sérieux dans votre travail- Travailler en équipe a toujours été l’une de vos qualités.- Vous avez le gout du partage.- Vous savez garder l’originalité de votre plume tout en respectant les consignes de rédaction qui vous sont transmis.- Les fautes d’orthographe et de grammaire sont vos bêtes noires.Votre mission consistera à rédiger des textes sur des sujets variés.Le travail que nous vous proposons est en CDI après une période d’essai. Vous travaillerez dans un cadre convivial et agréable. Nous vous offrons un poste stable avec une rémunération attractive.Envoyez un CV + LM sur recrutement.nasnie@outlook.com pour postuler.Seules les candidatures retenues feront l’objet d’une convocation pour entretien et test dans nos locaux.Cliquez sur le lien pour en connaître plus sur "Emploi et services Recrutement Rédacteurs (trices) locaux".
Olombelo Ricky: hizara ny “Mozika tsisy farany”
Tsy nisy ny “Manal’Azy” tamin’ity… Niaraha-niaina ny antony, saingy niezaka ny hanentsina izany ry Olombelo Ricky. Taorian’ireo “cabarets” sy ny fivoahana tany amin’ny faritra, hizara ny “Mozika tsisy farany” izy, ny asabotsy 25 septambra ho avy izao, manomboka amin’ny 4 ora hariva, etsy amin’ny Canal Olympia Andohatapenaka. Hiavaka amin’ny mahazatra ny seho, satria misy tolotra vaovao napetraky ny Catt Express Events, izay mpikarakara. Hanan-tsafidy mantsy ireo mpijery, na hipetraka ambony latabatra toy ny anaty cabaret, na hijoro toy ny fety an-kalamanjana, na hijery ao anatin’ny fiarany ihany. Ny lafiny ara-javakanto kosa, tsy hivaona amin’ny “Manal’azy” ny fiarahana. Hotetezina an-kira ny vanim-potoana rehetra nolalovan’ny tarika Olombelo Ricky. “Mozika tsisy farany” rahateo ny anaran’ny seho, hanehoana izay fitohizana izay. Hanaingo ny fiarahana ny nanasana manokana ny La Chorale, izay antoko mpihira efa niara-dalana tamin’ny tarika ihany.Zo ny AinaL’article Olombelo Ricky: hizara ny “Mozika tsisy farany” a été récupéré chez Newsmada.
IKM – Lalah Smile… Hizara fitiavana an-kira
Hitondra sy hizara fitiavana an-kira etsy amin’ny IKM Antsahavola, anio tolakandro manomboka amin’ny 2 ora sy sasany ry Lalah Smile. Ho entin’izy ireo an-tsehatra amin’izany ny « acoustic love song ». « Hifampihaino , hifampitsikitsiky , hifanohana ara-mozika mahafinaritra isika amin’io fotoana io », hoy izy ireo. Hitendry ny gitara amin’izany i Andy Kevin raha eo amin’ny piano kosa i Tolotra Rakotondraheliarivelo. Eo amin’ny fihirana i Lalah Smile raha mpikarakara izao hetsika izao i Maël Raharinjatovo.Tsiahivina fa maimaim-poana ny fidirana amin’ity fampisehoana ity. Na izany aza, hisy ihany ny valopy hozaraina ho an’ireo mpanatrika.Synèse R.L’article IKM – Lalah Smile… Hizara fitiavana an-kira a été récupéré chez Newsmada.
Zandarimaria: voatendry ho kaomandin’ny sekoly sy fanofanana ny Jly Botou
Tontosa ny asabotsy teo tao amin’ny Toby Jly Richard Ratsimandrava ny famindram-pitantanana arakasa teo anivon’ny fibaikoana ireo sekoly sy fanofanana eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Voatendry hisahana ity andraikitra vaovao ity ny Jly Estelin Botou rah any Jly Benjamina Ratovoson ny kaomandy teo aloha. Nitarika izany teny an-toerana ny kaomandin’ny zandarimariam-pirenena.J.CL’article Zandarimaria: voatendry ho kaomandin’ny sekoly sy fanofanana ny Jly Botou a été récupéré chez Newsmada.
Fandinihana ny antontan-taratasy: ho fantatra rahampitso ny kandidà ho filohan’ny OJM
Ho fantatra rahampitso raha mahafeno na tsia ny fepetra sy ny pitsopitsony rehetra notakina amin’ny filatsahan-kofidin’ny kandidà ho filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety (OJM). Tsy nisy afa-tsy iray ny lisitra nirotsaka, tarihin’ny mpanao gazety eo anivon’ny RNM, Rasoloarison Harifeno Monica, nametraka izany miaraka amin’ny anto-bola telo tapitrisa ariary voarain’ny komity mpikarakara ny fifidianana, ny alahady teo. Hanomboka ny 30 septambra hatramin’ny 14 oktobra ny fampielezan-kevitra ary hatao ny 16 oktobra kosa ny fifidianana. Miara-manatanteraka izany ny Ceni sy ny fiarahamonim-pirenena Safidy. Miisa 1 509 kosa ireo mpanao gazety matihanina, mpifidy andrasana. Ahitana biraom-pifidianana ny faritra 23 ary entina manatanteraka ny fifidianana ny kara-panondrom-pirenena.Synèse R.L’article Fandinihana ny antontan-taratasy: ho fantatra rahampitso ny kandidà ho filohan’ny OJM a été récupéré chez Newsmada.
Nisesisesy hatrany ny loza… Fiara roa indray nofaohin’ny kamiaobe teny Fenoarivo
Mampiaiky ny rehetra mihitsy ny lozam-pifamoivoizana sesilany tato ho ato izay. Vao ny alin’ny asabotsy teo no nisy ilay lozam-piarakodia mahatsiravina namoizana ain’olona 12 be izao tao Camp Robin Ambohimahasoa. Kamiaobe tapaka frein koa no nitrongy fiaran’olona teny amin’ny lalana digue Fenoarivo, omaly tolakandro. Naratra avokoa ireo olona tao anatin’ireo fiara handeha handevina raha nivadika tany an-tanimbary kosa ilay kamiaobe namoa-doza. Mafy ny fifandonana satria potika avokoa ireo fiara nifandona. Na teo aza anefa izany, tsy nisy ny aina nafoy. Tonga teny an-toerana nanao fanadihadiana ny zandary.Fa taksiborosy Sprinter iray koa no nivadika tao Soavinitompo Soaniadanana, omaly. Taksiborosy avy any Antsiranana hiakatra aty Antananarivo ity tra-doza ity. Tsy nisy ny aina nafoy fa naratra mafy kosa ny mpamily ka nentina namonjy hopitaly.J.CL’article Nisesisesy hatrany ny loza… Fiara roa indray nofaohin’ny kamiaobe teny Fenoarivo a été récupéré chez Newsmada.